Soo iibso budada Altrenogest (850-52-2) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Gowrado Dumar ah / Budada Altrenogest
SKU: 850-52-2. Category: Gowrado Dumar ah
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Altrenogest (850-52-2), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Dufanka Altrenogest waxaa badanaa la siiyaa miisaska dhalinyarada ee warshadaha caanaha sida isticmaalka qashinka ah si loo xakameeyo dabeecada galmada / dagaalka. Daraasaddan, Qeybta Horjoogaha 2-da ee Horre Horse Horseedka tababarka hore waxaa lagu maamulay altrenogest (0.044 mg / kg BW maalin kasta) si loo ogaado saamaynta kudhaca dabeecadaha galmada / gardarrada, xuduudaha baaritaanka, iyo astaanta hormoonka steroid.
Altrenogest video budada ah
Dufanka Altrenogest Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Dufanka Altrenogest
Dhibcaha Biyaha: 116 ilaa 120 ° C
Altrenogest wareega budada
COMMON BRAND (S): budada altrenogest
MAGACA DHAQAALAHA (S): Qalabaynta, Matrix, Qalabka Daawada, Matrix
Isticmaalka budada Altrenogest
Daawada Altrenogest, progestagen, waa 17α-allyl derivative of trenbolone wakiil awood leh oo qaabdhis ah oo la mid ah hormoonka galmada ragga, testosterone. Budada Altrenogest waxaa loo isticmaalaa si ballaaran, iyo mudo dheer, fardaha tartanka dumarka ah. Tani waxay ku dhacdaa isku day ay ku doonayso in ay kor u qaaddo isbeddelka taranka, taas oo ka dhigaysa mid si xaraarad leh oo ku haboon tababarka iyo tartanka. Si kastaba ha noqotee, maamulka dheeraadka ahi maaha mid ku saleysan talooyinka soo saaraha. Wadamada badankood, daroogada ayaa loo diiwaangeliyaa oo kaliya maamulka afka si ay ugu maraan maalmaha 10 loogu talagalay ujeedada soo-qaadista oestrus oestrus marxaladda ku-meel-gaadhka ah ee wareegga oestrus. Dufanka Altrenogest wuxuu ciribtiraa oestrus dabeecadaha dabiiciga ah ee ku jira 2-3 maalmood ee bilowga maamulka. Dhibaatooyinka maamulka muddada fog ah ee loo maro budada Altrenogest inta badan lama yaqaan, gaar ahaan marka loo eego kuwa loo isticmaalo tartanka. Intaa waxaa dheer, ma cadda in daroogadu ay saameyn xun ku yeelato dabeecadaha anabolic ama anshaxa.
Daraasaddan ayaa loo qorsheeyay in ay bixiso qiimeyn hordhac ah oo la xidhiidha maamulka dheeraadka ah ee Altrenogest budada caanaha ah si loo yareeyo marxaladaha kala duwan ee bulshada dhexdeeda, dhibcaha jirka iyo jirdhiska jirka (BCS). Laba iyo toban maar ah oo ah noocyada isku dhafan (Thoroughbred iyo Standardbred) ayaa laga soo iibsaday ganacsade farabadan. Xayawaanka ayaa lagu hayaa daaqa iyagoo ah hal koox oo wadarta guud ee toddobaadyada 20. Ka dib markii la iibsaday, dhammaan maareynta ayaa la marey hababka daryeelka caafimaad ee caadiga ah, oo ay ku jiraan goryaan-bax, ilko-barar, ilko-kabasho iyo tallaal. Mares waxaa loo ogolyahay in ay ku habboonaato jawiga cusub muddo afar toddobaad ah inta lagu guda jiro waqtigaas oo ay xasiliyeen sida koox bulsho ah, waxayna caadaysteen nidaamyada maareynta caadiga ah, sida, qabashada, miisaanka, meelaynta culus, maamulka daaweynta afka siriinjka. Inta lagu jiro xilliga dhan ee daraasaddaha dheeraadka ah ee daraasadda digaaga ayaa la quudin jiray. Mares ayaa la miisaamey, dhibcana waxaa la duubay laba jeer todobaadkii.
Waa maxay qiyaasta budada Altrenogest
Maamulada afka ah ee budada Altrenogest ee loogu talagalay xakamaynta oestrus ee fardaha tartanka ayaa la aaminsan yahay in ay ku baahsan yihiin farsamooyinka dabiiciga ah, waxaana si joogto ah loo maamuli karaa dhowr bilood inta lagu jiro xilliga tartanka. Si loo eego haddii budada cayriin Altrenogest ay leedahay wax anabolic ama waxyaabo kale oo kor u kaca ah oo kor u qaada guryaha oo laga yaabo inay fardaha siinayaan faa'iido aan cadaalad ahayn, waxaan baarnaa saamaynta afka budada Altrenogest (0.044 mg / kg), maalin kasta muddo 8 toddobaad ah, jaangooynta, miisaaniyadda dhaqdhaqaaqa, jirka-jirka iyo dhibcaha xaaladda jidhka ee 12. Waxaa lagu soo gabagabeeyay in muddo dheer oo ah maamulka afka ee Altrenogest budada cayriin ah ee lagu taliyey in la qaato qiyaasta qiyaasta miisaannada aan caadiga ahayn ay saameyn ku yeelanayso hanti-ururinta, miisaanka jirka ama dhibcaha xaaladda.
Sida ay u shaqeeyaan budada Altrenogest
Dhibaatada noocan ah, budada Altrenogest weligeed ma aysan awoodin inay kantaroolaan xakamaynta la saadaalin karo ee wareegga xajmiga ee mareegga. Sidaa daraadeed, waxaan eegnay 12 mareska lagu daaweeyay budada Altrenogest oo cayriin ah si loo ogaado sababaha ay ku fashilmeen in ay xakameyaan wareegga xajmiga. Mareeyayaasha waxaa lagu quudiyey budada Altrenogest ee 15 ilaa maalmaha 20 waxaana lagu baaray horumarinta follicles, ugxansidaha, iyo sameyska luteum ee jirka inta lagu jiro daweynta. Iyadoo la adeegsanayo ultrasound-ka waqtiga dhabta ah iyo radiyaha daawada ee progesterone, waxaannu ku soo gabagabeynay in budada Altrenogest ay awood u lahayn in ay xakamayso koritaanka qulqulka si ay u korodho cabbirka marmarka qaarkood, taasoo keenta in ugxantu ku qaadato muddada daweynta ama ka hor intaan la sugin daaweynta. Intaa ka sokow, budada Altrenogest uma muuqato inay gaabisey nolosha nololeed ee loo yaqaan 'corpora lutea' kaas oo la sameeyay intii lagu jiray daaweynta; ee 4 mares, tani waxay keentay joogteynta shirkadda lutea ka dib dhammaadka muddada 15-da ee daaweynta. Natiijooyinkii ugu danbeeyay ayaa na soo jeediyay in haddii la yiraahdo qiyaasta luteolytictic ee prostaglandin la siiyo dhamaadka Altrenogest daaweynta budrka cayriin, waxaa jiri lahaa hagaajin lahaa wareegga wareegga xajmiga. Natiijooyinka daraasaddeena ayaa xaqiijiyay in aragtidayada caafimaad ee ah in budada Altrenogest ay ku qanacsan tahay in la xakameeyo wareegga xajmiga ee xaaladaha qaarkood, laakiin waa in aan loo isticmaalin marka goynta saxda ah ee uureysiga loo baahan yahay.
Faa'iidooyinka budada Altrenogest
Dufanka Altrenogest (ALT), Progestogen synthetic, iyo gonadotropins exogenous ayaa loo maamulay doofaarka la yidhaahdo Swine Leukocyte Antigen (SLA) oo kudheeray minjiga minerka ah kaas oo sida caadiga ah leh sicir barar oo yaraaday iyo cabbir yar oo qashin ah. Daraasadda 1, 15 doofaarka dumarka qaangaarka ahi waxay ahaayeen labada koontarool (Group I, n = 5), waxay quudiyaan 15 mg ALT / maalin maalmaha 14 (Koox II, n = 5), ama la quudiyay ALT waxaana lagu daaweeyay xaamilada gonadotropin (1200) IU, im) iyo goryadotropin bini-aadanka ah (500 IU, im) 24 h iyo 104 h, siday u kala horreeyaan, ka dib markay ka baxaan ALT (Koox III, n = 5). Daraasadda 2, kooxo tujaar ah oo doofaarro ah (I, n = 24; II, n = 11; III, n = 11) waxaa loo la dhaqmaa si la mid ah kuwa ku jira 1 marka laga reebo doofaarka ku jira 2 (Kooxaha II iyo III). Ovary ee dhammaan xayawaanka ee labada cilmi baaris ayaa lagu baaray laparoscopically ama laparotomy 5-8 maalmood ka dib estrus si loo qiimeeyo dhaqdhaqaaqa umulisada. Qeybta II iyo III ee xayawaanka Study 2 waxaa lagu nadiifiyay dhexdhexaadinta dhaqanka unugyada, kaas oo lagu qiimeeyay joogitaanka iyo tayada embriyaha.
Doofaarku ma muujin dabeecad qarsoodi ah inta lagu jiro maamulka ALT. Dhamaan xayawaanku ma muujin dabeecad qumman oo caadi ah ka dib markay ALT ka baxday. Marka xogta labadan daraasadood la isku darey, 2 ee 16 (12.5%) ee kooxda II iyo 6 ee 16 (37.5%) ee doofaarka kooxda III ayaa ku fashilmay inay muujiyaan hannaanka qotomiska. Ka dib markii ay ALT la socotay, dumarka Kooxaha II iyo III waxay ku soo noqdeen xayawaanka 5.6 ± 0.3 iyo 5.8 ± 0.3, siday u kala horreeyaan (p> 0.05). Tirada laydhka sheybaarka ayaa kordhay (p <0.05) daaweynta ALT oo keliya (11.4 ± 1.8) marka la barbardhigo kantaroolka (6.9 ± 1.3) waxaana la kordhiyay (p <0.01) oo dheeraad ah iyadoo la adeegsanayo gonadotropins (22.6 ± 1.9). Muraayad caadi ah oo muuqata iyo blastocysts ayaa laga soo helay 14 ee haweenka 22. Si kastaba ha ahaatee, cysts ayaa laga helay endometrium of 5 ee 9 iyo 9 ee doofaarrada 10 ee Kooxaha II iyo III, siday u kala horreeyaan. Xaddiga xaaladdan, ayaa lagu qeexay sida histologically ahaan cystic endometrial hyperplasia (CEH), kala duwanaa dumarka, iyo dhacdooyinkoodii waxay u muuqdeen da 'ku xiran. Qiimaynta ku xigta ee ah digaagga doofaarka ee SLA ee aan la daweynin ayaa muujisay in CEH uusan xidhiidh la lahayn daaweynta orgonadotropin ee ALT.
Daraasadani waxay cadeyneysaa in daaweynta ALT ay tahay mid waxtarkeedu ku xiran yahay estrus waxayna leedahay saameyn wax ku ool ah oo ku saabsan jawaab-celinta maskaxda ah ee doofaarka masaafada SLA. Isticmaalka dheeriga ah ee gonadotropins ka baxsan waxay kicisaa jawaab kale oo jilicsan; Si kastaba ha noqotee, dhacdooyinka iyo xoojinta dabeecad qoto dheer Dib u soo kabashada maskaxda caadiga ah waxay muujinaysaa in bacriminta aan la daweyn. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta qashinka yar ee xilliga gaaban waxaa laga yaabaa inay la xiriirto qoyaanka cystic endometrium ee uterine, taasoo keeni karta dhimashada maskaxda iyo / ama hoos u dhigista wareegga.
Badeecada cayriinka Altrenogest ee Altrenogest
Dib u eegista budada altrenogest
Daraasadani waxa ay baaris ku samaysay saameyn ku yeelanshada dabeecada galmada iyo gardarrada iyo xudduudaha miisaaniyada ee dhalinyarada dhalmada sababtoo ah maamulka maalinlaha ah ee Altrenogest budada muddo 8 toddobaad ah. Xuduudahaan waxaa sidoo kale la baaray ka dib markii ay soo kabsanaayeen muddo siddeed toddobaad ah (maalinta 111). Saddex jeer baaritaanka (maalmaha-9, 60 iyo 111), cabbirada waxaa lagu duubay miisaanka, wareegga xajmiga iyo dhibcaha xaaladda jidheed ee miiqyada. Noocyada labada kooxood ee daaweyntu ma kala duwanaan miisaanka, dhibcaha xaaladaha jidhka ama cabbiraadaha metacarpal ee daraasadda oo dhan. Hase yeeshee, xaddiga maqaarka ayaa hoos u dhacay (P <.05) oo lagu daboolay isbitaallada lagu daaweeyo todobaadkii siddeedaadna ay hoos udhaceen (P <.05) kadib sideed usbuuc kadib joojinta budada "Altrenogest" (Isbuuc 16). Qiimaha udubdhexaadku waxay kala duwan yihiin (P <.05) oo u dhexeeya kooxaha xakamaynta iyo daaweynta toddobaadkii 16. Hoos-u-dhac ku yimaadda wax-soo-saarka shahwada maalinlaha ah (DSP) ayaa sidoo kale lagu ogaaday in kooxo daaweyn ah oo ah sideed todobaad (P <.01) iyo toddobaadyada 16 (P <.05). Hoos-u-dhackan lagu qiyaasay DSP waxay u badan tahay inuu ku xiran yahay wareega xuddunta. Isbedelka "Spermatozoal" ayaa si aad ah u kordhay gudaha qaababka daaweynta, iyada oo madaxa cilladda (P <.009) iyo isbeddellada qanjirada (P <.001) oo kordhaya xilliga ururinta ka hor iyo muddada aruurinta siddeed toddobaad.
Stallions ayaa loo dhajiyay dabeecadaha galmada iyo gardarrada iyadoo la adeegsanayo baaritaan qeexan oo la adeegsanayo saddex jeer inta lagu guda jiro daraasaddan (maalmo-12, 57 iyo 111). Dabeecadda ayaa la qiimeeyay iyagoo soo bandhigaya naqshadeynta muraayada gacanta lagu hayo ee estrus muddo saddex daqiiqo ah oo fiirin ah. Xilliyada Flehmen iyo mudada yaraaday (P <.05) oo ka dhexjirta altrenogest budada-daaweynta budada ah ee daaweynta muddada todobaadlaha ah. Muddada guska guska ayaa hoos u dhacay (P <.08) toddobaadkii siddeedaad ee munaasabadda daaweynta. Mudada dheellitirka (P <.05) iyo joogteynta (P <.005) ayaa sidoo kale hoos u dhacay kooxda daaweynta sideed usbuuc.
Macluumaadkani wuxuu soo jeedinayaa in daaweynta dhalooyinka da'da yar leh budada Altrenogest ee siddeed usbuuc ay calaamad u tahay dabeecadaha galmada iyo dabeecadaha iyo wax soo saarka shahwada. Qaar ka mid ah xuduudahan ayaa ku soo laaban qiimeheeda ka hor inta aan la gaarin sideed todobaad kadib markii la joojiyo daaweynta. Daraasad dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo baadho kartida dhalinyarada dhalinyarada ah si ay uga soo kabtaan waqtiga ka soo reyneysa saameynta xun ee maamulka budada Altrenogest sida ku cad muujinaysa dhimista libido, qiyaasta maqaarka iyo wax soo saarka maalinlaha ah ee lagu qoray daraasaddan.
Sida loo iibsado budada Altrenogest ee AASraw
Macmacaanka Altrenogest-ka cayriin